Ny fanohizana ny fizahantany an-tanàn-dehibe Eoropeana ankehitriny dia hetsika henjana hifanaraka amin'ny filan'ny mponina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Ny fanohizana ny fizahantany an-tanàn-dehibe Eoropeana ankehitriny dia hetsika henjana hifanaraka amin'ny filan'ny mponina
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovao Momba ny Tseky • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • fiantsenana • Vaovao Mafana Espaniola • News sustainability • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fanohizana ny fizahantany an-tanàn-dehibe Eoropeana ankehitriny dia hetsika henjana hifanaraka amin'ny filan'ny mponina.
Satria misokatra tanteraka amin'ny mpizahatany iraisam-pirenena ny tanàna malaza eoropeana, ny tompon'andraikitra amin'ny fizahantany dia tsy maintsy mampiasa io vanim-potoana fanavaozana io mba hahazoana ny fifandanjana eo amin'ny tombom-barotra ara-toekarena sy hiantohana ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny mponina.
Ny valan'aretina COVID-19 maneran-tany dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fizahan-tany rava tanàna Eoropeana.
Manomboka miverina any amin'ireo tanàn-dehibe manerana an'i Eoropa ny Eoropeana miaraka amin'ny fahatokisan-tena ho jabbed roa.
Talohan'ny areti-mifindra COVID-19, ny fitomboan'ny fizahantany iraisam-pirenena any amin'ireo tanàna toa an'i Barcelona, ​​​​Amsterdam ary Prague dia niteraka hatezerana teo amin'ireo vondrom-piarahamonina teo an-toerana.
Hatramin'ny nipoiran'ireo mpitatitra sarany sy trano fonenana, dia nitombo be ny lazan'ny fizahan-tany rava tanàna ao anatin'ny dia an-kontinenta manerana an'i Eoropa. Araka ny filazan'ny mpandinika ny indostria, 38% amin'ireo namaly no nilaza fa mazàna no manao io karazana fitsangatsanganana io izy ireo, ka izany no fahatelo malaza indrindra eran-tany, aorian'ny fizahan-tany masoandro sy tora-pasika ary mitsidika namana sy havana (VFR).
Talohan'ny areti-mifindra COVID-19, mitombo isan-taona (YoY) tsy tapaka ny fizahan-tany iraisam-pirenena mankany amin'ny tanàna toy ny Barcelona, Amsterdam ary Prague dia niteraka hatezerana teo amin'ireo vondrom-piarahamonina teo an-toerana, niteraka fanerena tamin'ny governemanta teo an-toerana.
Na dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fizahan-tany rava tanàna aza ny valan'aretina, miaraka amin'ireo mpandeha mirona hisoroka ny faritra be mponina amin'ny ampahany betsaka amin'ny taona 2020 sy 2021, dia manomboka miverina any amin'ireo tanàn-dehibe manerana an'i Eropa ny Eoropeana miaraka amin'ny fahatokisana ny ho jabbed roa ary mihena ny fameperana. mikorontana.
Satria misokatra tanteraka amin'ny mpizahatany iraisam-pirenena ny tanàna malaza eoropeana, ny tompon'andraikitra amin'ny fizahantany dia tsy maintsy mampiasa io vanim-potoana fanavaozana io mba hahazoana ny fifandanjana eo amin'ny tombom-barotra ara-toekarena sy hiantohana ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny mponina. Ohatra, ny fanokafana indray ny Prague mankany amin'ny fizahantany iraisam-pirenena dia ho mahaliana ny fanaraha-maso.
Ao anatin'ny areti-mifindra, ny tompon'andraikitra amin'ny fizahantany ao Prague nanambara ny fikasan'izy ireo hampiasa ny fotoana fitsaharana hamoronana endrika fizahan-tany maharitra kokoa ho an'ny ho avy, izay hampitony ny mponina. Talohan'ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra, ny tanàna dia nanana olana tamin'ny mpizaha tany mikorontana manakatona ny afovoan-tanàna ary mampihena ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny mponina ao an-toerana. PragueNy fifantohana vaovao ateraky ny areti-mifindra dia voalaza fa amin'ny fisarihana mpizahatany 'sandany be' izay hijanona ela kokoa, handany vola bebe kokoa ary amin'ny ankapobeny dia mandray andraikitra bebe kokoa mandritra ny diany.
Ity faniriana avy amin'ny tompon'andraikitra ara-pizahantany ao Prague ity mba hanova anarana amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra ara-barotra sy hanosehana ireo fepetra vaovao mety hitranga dia mety haharitra ela satria mbola mitohy ny fiantraikan'ny valan'aretina. Miaraka amin'ny fizahan-tany miditra ao amin'ny Repoblika Czech izay mbola ampahany kely amin'ny haavon'ny pre-pandemic, ny Czech Tourism Union dia niantso ny manampahefana Prague mba hihetsika haingana mba hisorohana ny krizy ara-toekarena.
Miaraka amin'ny fanohanana ara-bola mifandraika amin'ny COVID izay mifarana ankehitriny ho an'ny orinasam-pizahantany maro manerana an'i Eropa, ny tanàn-dehibe eoropeana dia mety tsy maintsy mifantoka indray amin'ny hamaroana noho ny kalitao hanentanana ny fanarenana ara-toekarena.
Ity fanovana paikady ity dia mety hahatonga ny fahasosoran'ny mponina maro izay tsy mila miantehitra amin'ny fizahan-tany amin'ny fampidiram-bola. Na izany aza anefa dia tokony ekena fa maro ihany koa ireo mponina any an-toerana no hanao fanentanana amin’ny fiverenan’ny fizahantany faobe mba hahafahan’izy ireo manatsara ny fitantanam-bolany manokana. Ny fiverenana feno amin'ny fizahan-tany miala amin'ny tanàna amin'ny taona ho avy dia mahatonga ny fifandanjana mafy ho an'ny tompon'andraikitra ao an-tanàna, ary miteraka resabe hatrany.